iZotope na-agba Academy of Motion Picture Arts and Sciences 'Scientific and Engineering Award maka ojiji nke igwe ọmụmụ + AI na ihe nkiri / ndekọ ndekọ | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » iZotope na-agba Academy of Motion Picture Arts and Sciences 'Scientific and Engineering Award maka ojiji nke igwe ọmụmụ + AI na ihe nkiri / ndekọ ndekọ
IZotope, onye ndu ndi oru ihe omuma ihe omuma di egwu, ka ndi mmadu na-achota Arts nke Motion Picture Arts na Science na a Onyinye sayensị na injinia. Onyinye a na-egosi onye ndu Alexey LukinỌrụ nke iZotope's RX audio nhazi usoro n'akụkụ otu ndị karịrị ndị mgbakọ na mwepụ 70, ndị injinia ngwanrọ, ndị na-emepụta ụda, ndị ọkachamara n'ihe banyere ngwaahịa na ndị ọzọ.
Enyere maka mmezu nke na -emepụta mmetụta doro anya na ọganihu nke ụlọ ọrụ ihe nkiri eserese, Onyinye Sayensị na Injinia gosipụtara ọnọdụ RX dị ka ngwa ọrụ ụlọ ọrụ maka idozi ụda na mmelite na mmepụta ihe nkiri ọgbara ọhụrụ. N'iji nyocha nke teknụzụ na nhazi ihe ngosi dijitalụ na mmụta igwe, RX enyerela imirikiti ihe nkiri na ihe ngosi TV iji weghachite ụda mebiri emebi, nke na-eme mkpọtụ na ọnọdụ adịghị mma. Ejiri ọgụgụ isi, nke a na-eji igwe na-amụ, jikọtara ya na ngosipụta ọhụụ na-enweghị isi nke na-enye ndị ọrụ ohere idezi ụda dị ka a ga - asị na ha na - edezi foto. Ebu ụzọ webata ya na 2007, iZotope RX abụrụla ụdị nsụgharị asaa ndị ọzọ ka ha bụrụ usoro kachasị ewu ewu maka nrụzi ọdịyo na ngwaọrụ nkwalite dịnụ.
RX nyere aka n'ọtụtụ dị iche iche Ọmụmụ Ụlọ AkwụkwọIhe nkiri na-emeri mmeri maka Ndezi ụda na Mixgwakọta includingda gụnyere Whiplash, Mad Max: oké iwe Road, na Bohemian Rhapsody, nakwa Onye kacha see ihe osise Birdman na ogologo ndepụta nke fim kacha akwụ ụgwọ gụnyere Black akukonta na Ndị na-akwụ ụgwọ: Endgame. Ike RX ịghaghachi ụda mebiri emebi nyeere ntọhapụ nke ihe nkiri ikpeazụ Orson Welles Akụkụ nke ọzọ nke ifufe ma na-edozi nsogbu ọdịyo kwa ụbọchị na isi ihe eji eme ọhụụ gụnyere "Game nke n'ocheeze" na "Onye Nwụrụ Anwụ Na-aga Ije." Ndị otu ụlọ ọrụ dịka Cinema Audio Society (onye mmeri 5 maka Teknụzụ Nzuzo) na-asọpụrụ mgbe niile, RX agbanweela nka na sayensị nke ụda maka ihe nkiri.
“Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ maka Alexey na ndị otu iZotope inweta onyinye a,” ka ndị na-ekwu Akara Ethier, onye nchoputa na onye isi nke iZotope. “Dị ka ụlọ ọrụ, uche anyị bụ ịkwado ọrụ okike nke ihe nkiri site n'iwepu ihe mgbochi teknụzụ na mmepụta ihe ọdịyo, anyị nwere ekele maka mmata a nke ihe ọhụrụ anyị na nchụso a. Anyị nwekwara obi ekele maka obodo nke ndị ọkachamara na-ege ntị bụ ndị kwadoro anyị kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ ịchụso ụkpụrụ ndị kachasị elu na ịkọ akụkọ banyere ihe mere anyị ji arụ ọrụ anyị. ”
Alexey Lukin, onye isi DSP Engineer na iZotope na - agbakwunye, "Ọ bụ afọ 18 gara aga na mbụ m mepụtara echiche teknụzụ ole na ole nke ga - emesị ghọọ iZotope RX." “Ngbanwe a nke otu narị ahịrị nke koodu C ++ na ụlọ ọrụ nke ngwa ọrụ ọ bụ taa agaghị enwe ike ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmekọrịta dị ịtụnanya na ndị ọkachamara na-ege ntị. Nụ site n'ọnụ ha ozugbo banyere mkpa okike ha enyela anyị ike ma kpalie anyị ịme ụzọ ndị na-agaghị ekwe omume nke idezi ọdịyo dị adị. ”
iZotope emeriwokwa otuto dị ukwuu maka ngwanrọ mmepụta egwu ha, gụnyere Ozone maka ịmụta, Neutron maka ịgwakọta, na Ike gburugburu obibi nke ndekọ, mmepụta na mmekorita ngwaọrụ. N'etiti ndị Fid kachasị nwee mmasị na Fans bụ Pete Townshend, Trey Anastasio, Phoebe Bridgers, Paramore's Hayley Williams na ọtụtụ ndị ọzọ, ebe sọftụwia iZotope enyerela aka ịdekọ ihe ndekọ site n'aka Beyonce, Sia, Doja Cat, Shawn Mendes, Kendrick Lamar na ndị ọzọ.
Na iZotope, oke ụda na-emetụta anyị. Teknụzụ igwe okwu anyị nwere ọgụgụ isi na-enyere ndị na-egwu egwu, ndị na-emepụta egwu, na ndị injinia ihe eji ege ntị lekwasịrị anya na nka ha karịa teknụzụ dị na ya. Anyị na-emepụta sọftụwia na - emeri mmeri, ngwa mgbakwunye, ngwaike na ngwa ngwanrọ nke arụmọrụ ọdịyo kachasị dị mma, mmụta igwe na ntanetị kensinammuo.
LG PRO: CENTRIC CATENA SIMPLIFIESPUBLIC SPACE TV AKW .KWỌ - May 17, 2021
Michael Marquart na-agbanye envelopu nke ihe omimi - April 29, 2021
Obere okwute na-ebupụta Njikwa obere okwute iji meziwanye ndokwa netwọk IP - April 28, 2021
Previous: Lynette Duensing akpọrọ Colorist Society International Fellow
Osote: Onye na-ese ihe nkiri Mark Patten BSC na-agwakọta lenses Cooke site na oge dị iche iche na Marksman